सरकार विदेशी धर्मप्रचारकको टोपी लगाएर सनातन धर्मसंस्कृतिको हत्या गर्दैछ : बालकृष्ण खाँड - Sabal Post
सरकार विदेशी धर्मप्रचारकको टोपी लगाएर सनातन धर्मसंस्कृतिको हत्या गर्दैछ : बालकृष्ण खाँड
काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले विदेशी धर्मप्रचारकको टोपी लगाएर नेपालको सनातन धर्मसंस्कृतिमाथि सरकारले प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बोल्दै नेता खाँडले सो कुरा बताएका हुन्। सरकारले शान्तिपूर्ण रुपमा भेला भएका आम नागरिकमाथि बर्बरतापूर्ण आक्रमण गरेको भन्दै नेता खाँडले सो कार्य निन्दनीय भएको भन्दै भर्त्सना गरे।
उनले सरकारले विदेशी धर्मप्रचारको टोपी लगाएर नेपाली धर्म र संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने काम गरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘धर्मप्रचार विश्वविद्यालयले पिएचडीको टोपी लगाईदिन्छ। धर्म प्रचारकको टोपी लगाएर नेपालको पुरातन, सनातन धर्म संस्कृतिमाथि सरकारले प्रहार गर्दछ। यो घोर आपत्तिजनक छ।’ संविधानले धर्म संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘गुठी सम्बन्धी विधयेकले धर्म संस्कृति परम्परा र सम्पदामाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ।’
उनले गुठीयारले राजधानी काठमाडौंको माईतीघरमा सरकारको ध्यानाकर्षण लागि शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध जुलस गर्दा प्रहरीले धरपकड गर्ने काम गरेको भन्दै उनले सो कार्यको विरोध गरेका थिए। सरकारले संविधानको मर्मविपरीत विधेयकहरु ल्याउने काम गरिरहेको दाबी गरे। ‘संविधान विपरीत विधेयकहरु बारम्बार सदनमा किन प्रवेश गराउन खोजिन्छ? संविधानको गम्भीरतापुर्वक अध्ययन गरियोस्। संविधानलाई स्वामित्वमा लिएका राजनीतिक शक्तिहरुले , दलहरुले यो संविधानको पालना र रक्षा गर्नुपर्दैन? झन संविधानको पालना गर्नुपर्ने, रक्षा गर्नुपर्ने सरकार नै सविधान उलंघनमा छ। यो घोर आपत्तिजनक छ,’ उनले थपे, ‘पछिल्ला विधेयकहरु संविधानले प्रदत्त गरेका हक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने मनसायबाट ल्याईएको छ।’
सरकारले धर्म संस्कृति, परम्परा र गुठीको अस्तित्वलाई नै सपाप्त पार्ने ढंगले गैह् उत्तरदायी ढंगले गुठी सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका थिए। लगत्तै सभामुखले सत्तापक्षका सांसद पम्फा भुसाललाई बोल्न समय दिएपछि कांग्रेस सांसदहरुले नियमापत्ति गरेका थिए। आफूहरुको विरोधका बाबजुत सत्तापक्षका सांसदलाई बोल्नका लागि समय दिएपछि कांग्रेस सांसदहरुले नियमापत्ति गर्दै सभामुखको कार्यशैलीको विरोध गरे। सांसद भुसालले पनि गुठीसम्बन्धी विधेयक र गुठीयारको प्रर्दशनमा भएको धरपकडको विरोध गरेकी थिइन्।
लगत्तै कांग्रेसका बालकृष्ण खाँडले नै प्रमुख प्रतिपक्षीले विरोध गरिरहेका बेला सत्तापक्षका सांसदलाई बोल्न दिएकोमा गम्भीर आपत्ती जनाए। उनले भने, ‘सरकारको के हो धारणा? सरकारको धारणा हामीलाई चाहियो। यो गम्भीर आपत्तिजनक छ। यो नियमावलीको उलंघन हो।’ सभामुख कृष्ण महाराले मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रारम्भ भएको जानकारी गराउने बित्तिकै कांग्रेसका सांसदहरुले उभिएर विरोध जनाएपछि सभामुखले प्रमुख सचेतक खाँडलाई बोल्नका लागि समय दिएका थिए। कांग्रेसले माइतीघरमा गुठीयारले गरेको शान्तिपूर्ण प्रदेर्शनमा प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गरेको भन्दै गृहमन्त्रीको जवाफ मागेपछि मंगलबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ।
नेपाली कांग्रेस वुटवल उपमहानगर समीतीको आमन्त्रीत सदस्यमा…
के तपाईको बच्चा जिद्दी छ ?सुर्धान अपनाउनुस्…
वालिङ नपाद्वारा राहत वितरण तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि…